Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo - Dugsiyada Xaafada Robbinsdale
Macluumaadkan waxaa lala wadaagay qoysaska Isniinta, Dec. 21, 2020, waxaana ku urursan mawduuc. Su'aalaha dheeraadka ah ee badanaa la isweydiiyo ayaa hoos lagu dhajiyay, oo ay weheliyaan xulashada ereyga muhiimka ah.
Ardayda Dugsiyada Hoose
Ardayda Dugsiga Sare (Dugsiga Dhexe iyo Sare)
Talaado, Dec. 22 Wakhtiga kama dambaysta ah ee 281 Dugsiga Barashada Fogaanta
Quraac / Qado
Qolalka Go'doonka COVID-19
Daboolida wajiga / Wejiga wajiga
Baska Dugsiga / Gaadiidka
Per Minnesota ee la cusbooneysiiyey Qorshaha Barashada Badbaadada, dugsiyada hoose ee gobolka oo dhan waxay u wareegi karaan qaab shaqsiyeed ama qaab waxbarasho oo isku dhafan laga bilaabo Janaayo 18, 2021.
Waxaan si ku-meel-gaadh ah u qorsheyneynaa inaan u wareejino PreK-ga illaa ardayda fasalka 2-aad oo aan u gudubno waxbarashada shaqsiyeed Talaadada, Jannaayo 19, iyo fasallada 3-5 ee bilaabanaya Febraayo 1. Haddii aan u gudubno waxbarashada qof-ahaaneed ee buuxda (maahan isku-dhaf) dugsiga joogtid shan maalmood usbuucii. Barashada isku dhafan, ardaydu waxay ku jiri doonaan dugsiga laba maalmood usbuucii.
Kuwani waa taariikho gogol dhaaf ah maadaama ay tahay inaan sii wadno ka shaqeynta Kooxdayada Taliska Dhacdada si loo go'aamiyo qorshaha kala-guurka qaabka waxbarashada
Waxaan sii wadi doonnaa inaan raacno Qorshaha Amni ee Badbaadada Minnesota markaan dooranayno nooca barashada ee loo hirgalinayo ardayda dugsiga sare.
Qorshaheena ah in ardayda dugsiga sare loo wareejiyo qaab shaqsiyeed waxbarasho Janaayo 26 waxay ku xirnaan doontaa faafitaanka iyo halista gudbinta ee da 'kala duwan Kooxda gobolka ee khubarada caafimaadka waa inay taageeraan qorshaha.
Waqtiga kama dambaysta ah ee la isdiiwaangaliyo (ama laga baxo) dugsigeenna 281 Distance Learning waa 3 galabnimo Talaado, Dec. 22, 2020.
Waa inaan ogaanno inta arday ee laga qori doono xulashadeena waxbarashada masaafada si aan u hubinno shaqaale ku habboon. Sidaa darteed, kani waa muddada keliya ee diiwaangelinta ama ka bixitaanka xilli-dugsiyeedka labaad.
Isbeddel laga yaabo in qaarkood aysan ka warqabin:
Waaxda Waxbarshada ee Minnesota waxay soo saartay * hagitaan dheeri ah oo ku socota degmooyinka iskuulada iyadoo lagu saleynayo Amarka Maamulka ee Gudoomiyaha 20-82
Sababtoo ah shaqaalaha iyo arrimaha awoodda bannaan ee ka dhasha diiwaangelinta 'waqti kasta' ama ka-bixitaanka ikhtiyaarka waxbarashada masaafada degmada -
Degmo dugsi ama iskuul charter ah ayaa ku xadidi kara dhaqdhaqaaqa fogaanshaha barashada qoysaska codsanaya in looga guuro qof ahaan ama isku dhexjiraan sababo aan ahayn arrimo caafimaad.
Degmo dugsiyeedku waxay ku xaddidi karaan dhaqdhaqaaqa ka socda barashada fogaanta qof ahaan ama waxbarista isku dhafan
Ardayda ama qoysaska dooranaya inay u guuraan waxbarashada fog oo la xiriirta arrimo caafimaad waa in loo oggolaadaa waqti kasta.
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) 2020-21 Tilmaamaha Qorsheynta ee Dugsiyada Dadweynaha MN
Shirkad dibadeed ayaa dib u eegis ku sameysay oo kormeertay nidaamyada otomaatiyada dhismaha.
Iyadoo lagu saleynayo talooyinkooda, hababkeenna hawo-siinta iyo sifeynta ayaa la hagaajiyay. Waxaan rakibnay shaandhooyin kala duwan, waxaan socodsiineynaa hawo-qaadayaasha hawada waqti dheer waxayna kordhinayaan qulqulka hawada.
Nidaamyada kormeerka ah ee socda ayaa looga faa'iideysanayaa si loo hubiyo inay jirto tayada hawo sax ah dhammaan dhismayaasha.
Unugyada HVAC waxaa loo daayay inay socdaan labo saacadood ka hor iyo ka dib deggenaanshaha si ay u shaandheeyaan una soo geliyaan hawada banaanka si loo yareeyo wixii wasakheysan ee hawada ku jira.
Muunad qaadista shaqaalaha ayaa si joogto ah u sameeya.
Waxaan bilownay inaan hawada ku wareejino dhismayaashayada gugii hore si aan kor ugu qaadno tayada hawada. Tani waxay sababi kartaa in hawadu ay ka qabowdo sidii caadiga ahayd markii ay ardaydu ku jiraan dhismooyinka - labbiska lakabyada ayaa la dhiirrigelinayaa.
Quraacda iyo qadada waa lacag la'aan sanad dugsiyeedkaan iyada oo loo marayo Barnaamijka Adeegga Cuntada Xagaaga ee USDA.
Ardayda dugsiga hoose waxay ku qadeyn doonaan makhaayada haddii boosku u ogol yahay 6 fuudh oo masaafada u dhexeysa ardayda. Haddii kala fogaanshaha jireed ee u dhexeeya ardayda aan la waafajin karin makhaayadda isla markaana wada-hawlgalayaashu aan si cad loogu kala sooci karin kafateeriyada dhexdeeda, ardaydu waxay ku qadeyn doonaan fasalladooda.
Haddii ardaydu aysan qadada ka keenin guriga, ardaydu waxay mari doonaan qadka maqaayada, waxay helayaan cunnadooda waxayna ku laaban doonaan fasalka.
Halka ay ardayda dugsiga sare wax ku cunayaan (ama maqaayada ama fasalka) way ku kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran talo soo jeedinta kooxda Taliska Dhacdada oo ay weheliso awood dhisid iyo muuqaal laba jibbaaran oo qolka qadada ah.
Meelaha taabashada sare leh waa la nadiifiyaa maalinta iskuulka oo dhan. Meelaha sida guud loo taabto waxaa ka mid ah albaabbada, meelaha ka baxsan sanduuqyada, miisaska ardayda iyo kuraasta, miisaska, qalabka jimicsiga ee jimicsiga, jimicsiga jaranjarada, dermaha waxbarashada gaarka ah iyo sahayda, iyo dusha sare ee kale ee laga yaabo inay leeyihiin awood ay ugu gudbiyaan cudur faafa.
Jeermis-dilista ayaa dhacda fiid kasta ka dib markay ardayda iyo shaqaaluhu guriga aadaan. Tani waxay yareysaa halista kuwa u nugul kiimikada ama leh arrimaha neefsashada.
Qoysasku waxay u baahan doonaan inay sameeyaan baaritaanka iskuulka ee 'COVID-19' ee ardaygooda ka hor dugsiga. Shaqaaluhu sidoo kale waxay guriga ku sameeyaan is-baarid.
Dhisme kastaa wuxuu leeyahay isku-duwaha COVID. Shakhsiyaadkan, oo ay weheliyaan iskuduwaha Degmada COVID, waxay iskaashi la leeyihiin Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH).
Haddii kiis COVID-19 ah oo qumman loo xaqiijiyo arday ama xubin shaqaale ah, isku-duwahayada (yada) wada shaqeynta MDH ayaa go'aamiya wixii talaabooyin ah ee soosocda sida ogeysiinta xiriirada dhow, karantiilka, go'doominta, fasalka ama xiritaanka iskuulka.
Go'aamadaan waxay ku kala duwan yihiin xaalad-kiis-kiis sababo la xiriira sida tirada shaqsiyaadka la kashifay, dejinta / goobta, mudada soo-gaadhista, iwm.
Dugsi kastaa wuxuu leeyahay qol gooni u go'an oo COVID-19 ah marka lagu daro xafiiska weyn ee caafimaadka.
Haddii arday jiran yahay waxaa laga baari doonaa astaamaha COVID-19 waxaana laga qaadaa heerkulkiisa.
Haddii ardaygu la kulmayo astaamo u dhigma COVID-19 oo la go'aamiyay inay tahay inuu gurigiisa aado, ardaygu wuxuu ku sugi doonaa qolka go'doominta iyada oo xubin ka mid ah shaqaalaha loo qoondeeyay.
Nadiifiyaha gacanta, buufinta nadiifinta iyo sahayda ayaa laga heli karaa fasal kasta.
Wax barashada shaqsiyeed oo buuxda (maahan iskudhaf), ardaydu uma baahna inay ilaashadaan lix cagood oo masaafada bulshada ah miisaskuna uma baahna inay kala fogaadaan lix fiit
Ka dib markay dhigaan alaabtooda, ardaydu waxay ku dhaqi doonaan gacmahooda ugu yaraan 20 ilbidhiqsi saabuun iyo biyo.
Ardaydu waa inay guryahooda ka keenaan saadkooda iskoolka markasta oo ay macquul tahay.
Casharrada qaarkood ee takhasuska leh, sida muusikada, ayaa lagu qaban karaa fasalka weyn. Kuwa kale, sida waxbarashada jimicsiga ama farshaxanka, ayaa lagu qaban karaa qolalkaas.
Ardaydu waxay xiran doonaan wejiga iskuulka.
Ardayda waxaa lasiin doonaa fursado 'maaskaro goos goos ah' maalin dugsiyeedka oo dhan, halkaas oo ay kaga saari karaan wejiga daboolaya aag loogu talagalay fasalka fasal gaaban.
Sida ku xusan hagista cusub ee la soo saaray Arbacadii, Dec. 16, 2020, ardayda dugsiga hoose waxay sidoo kale xiranayaan waji dabool inta lagu jiro fasaxa gudaha iyo fasalka waxbarashada jirka ee gudaha.
Macallimiintu waxay xirnaan doonaan wejiga oo waxay heli karaan gaashaanka wajiga.
Ardayda waxay kusii socon doonaan fasaxa.
Ardaydu waxay ka saari karaan wejiga daboolaya fasaxa banaanka iyadoo lagu saleynayo hagida hadda.
Ardaydu waxay ku xidhan doonaan basaska basaska.
Waxaa kuraas loo qoondeyn doonaa baska.
Ardaydu waxay galayaan baska waxayna fuulayaan dhabarka ilaa hore.
Ardaydu uma baahna inay bulsho ahaan ka fogaadaan baska inta lagu jiro barashada shaqsiyeed ee buuxa.
Inta lagu jiro barashada isku dhafan, basaska kama badna wax ka badan 50% ardayduna waa ka fogyihiin bulshada.
Xaashida Su'aalaha La Weydiiyo, 12/21/20
Caafimaadka & Badbaadada
Sidee ayaa wax looga qaban doonaa xasaasiyadda cuntada markay ardaydu ku noqdaan dugsiga?
Daboolis dheeraad ah ma laga heli karaa basaska?
Waan ogahay inay jiraan gaadiid taga Xarumaha Taakulaynta Ardayda, laakiin miyaan dhigi karaa ardaygayga oo aan soo qaadan karaa?
Maxay yihiin qaar ka mid ah adeegyada laga bixiyo Xarumaha Taakulaynta Ardayda?
Xarumaha Taakulaynta Ardaydu ma furan yihiin Arbacada ama maalmaha aanu dugsigu fadhiyin?
Maxaan ka caawin karnaa jawaabta?
Waxaan si isdaba joog ah u balaarineynaa Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo. Guji su'aal ama waad ku kala shaandheyn kartaa mowduucyada ku taxan.